Author: admin Published Date: September 15, 2020 Leave a Comment on DASTUURKA CUSUB A PENTLAND PDF
Author: Zuluzragore Gazuru
Sidoo kale, marka xaalad ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Madaxweyne-ku-xigeenka wuxuu Madaxweynuhu u magacaabayaa Madaxweyne-ku-xigeen xubin ka tirsan Golaha Wakiilada, oo 2da Gole oggolaadeen.
Waxa ay ay u baahanyihiin cid u dammaanad qaadda xasillooni iyo deggenaan ay ku noolaadaan. Uu ku dhaco xukun ciqaabeed kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday; 5. Sections of this page.
Tilmaanta Guud ee Golaha. Shaqadu waa xaq uu leeyahay kuna waajib ah, muwaadin kasta oo gudan kara. Awoodda Xeer-dejinta ee Golaha Wakiilada.
Shareecadda lslaamku ma oggola in qofka Muslinka ah ka noqdo caqiidadiisa. Xubintu geeriyooto ama uu ku yimaado xanuun suurto gelin waaya gudashada xilkeeda. Waa inuusan dembi maxkamadi ku xukuntay ka gelin Qaranka Somaliland.
Rer mudug cayar loodaa wale Maxey baasuke rideeen dad Waxbartey igadheh uwac qof Rer mufuga oo saan camal Ucayara baasukayashan urida. Waxyaabaha ka Reebban Madaxweynaha. Musharaxa ayaa u balan qaaday bulshada inuu u hogaamin doono dhanaka uu horomarku ku jiro. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka.
Xaqa Dacwadda iyo lsdifaaca. Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1.
Hay’adaha Dawadda ee Qaranku waa: Hadaba, Said Dani gobolada Sanaag iyo Hayland uma ahayn Puntland shalay, ha ogaadaan marka Xildhibaanada sharaxta leh ee goboladaas in uusan istaahilin inay codkooda siiyaan. Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin.
Xoghayaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxyaha ama laamaha Wasaaradaha ayaa xilka sii fulinaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo gole cusub. Inuu leeyahay aqoon heer jaamacadeed ah amaba wax u dhigma oo dhinaca Diinta ah. Qof kasta wuxuu xor u yahay caqiidadiisa, lagumana qasbi karo inuu qaato tu kale.
December 24 at 2: Xeer ayaa qeexaya ciqaabta ka dhalan karta ku xad gudubkooda. Dastuurka waxa saldhig u ah mabaadi’da Islaamka. Inuu ka taliyo muran kasta oo Ia xidhiidha waafaqsanaanta Dastuurka.
Safar shaqo iyo u kuurgal xalada deegaanka Waxaa urur waynaha iftiin ay safar shqo iyo u kuur gal Ku tageen deeganka xiddasafarkaasoo qaatay mudo shan beri ahkaa soo uu ururka geeyaya dastyurka 15 xabo oo baalaha cad- cadeeda Ku shqeeya ee solarka Waxana uu ahaa wajigii saddexad ee xirida solarada magalada xidda Wajigii kowaad waxa no hirgalay 3xabo Diin aan ahayn Islaamka laguma faafin karo dalka. Kani waa Gabay la magacbaxay Ninka dooran duubka u xiroo asad inoo doorra Waxaan kula hadlayaa Baarlamaanka Cusub ee Puntland.
Xaalada Bosaso ayaa hada degan noloshuna si caadiya ayay usocotaa. Madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 45 cisho oo isku xiga muddo ka badan sabab caafimaad mooyaane.
Mushaharka iyo Gunnada Golaha Guurida. Magaalo-madaxda Jamhuuriyadda Somaliland waa Hargeysa. Muwaadiniintu waxay xor u yihiin in ay isu habeeyaan ururro siyaasadeed, cilmiyeed, dhaqameed, bulsheed, xirfadeed, ama kuwa shaqaale si waafaqsan xeerka.
Qoriga MPT ayaa waxaa ku hubeysan ciidammada ilaaliya madaxtooyada Turkiga, waa qori casri ah dawtuurka ay xilligan xiiseynayaan inay iibsadaan dalal uu ka mid yahay Boqortooyada Sacuudi Carabiga.
Waxay aaminsan tahay in khilaafaadka siyaasiga ah ee abuurma lagu xallilo dariiq nabadeed iyo wada-hadal; waxay dhawraysaa jiritaanka soohdimaha dalalka kale. Deegaanka iyo Wax-ka-qabashada Aafooyinka. Arrimaha ku xusan sastuurka laad ee qodobkan waxa ka reebban meelaha ama waqtiyada xeerku ka reebo mariddeeda ama degitaankeeda. Xubinta Golaha Guurtidu waxa ay u gudbin kartaa shaqo-ka-tegideeda Golaha Dusub, isagaana ka oggolaanaya.
Safar qaatay mudo shan cisho ah aya waxaan ku tagnay degaanka xidda.